Juventus ayaa qorsheyneysa inay lasoo wareegto Pogba %
Juventus ayaa qorsheyneysa inay lasoo wareegto Pogba
By Ramzi Yare	 On Sep 28, 2019
Kooxda dalka Talyaani ee Juventus ayaa qorsheyneysa inay bisha Janaayo u dhaqaaqdo xiddiga Manchester United Paul Pogba, sida ay sheegayaan wararka.
Pogba ayaa ahaa mawduuca si weyn loola xiriirinayay inuu ka tagayo Man United inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaaga, iyadoo Real Madrid iyo Juventus ay labadoodaba si aad ah loola xiriirinayay inay u dhaqaaqayaan xiddiga xulka France.
Pogba wuxuu sameeyey rabitaankiisa ah inuu ka tago garoonka Old Trafford bilowga xagaagii hore, isagoo sheegay inuu doonayo tartan cusub.
Maaha wax qarsoodi ah in tababaraha Real Madrid Zidane uu doonayo inuu Pogba keeno garoonka Bernabeu.
Sikastaba, Real Madrid qarash gareynta 300 milyan ginni ee ku aadan Eden Hazard, Luka Jovic, Ferland Mendy, Rodrygo iyo Eder Militao ayaa la micno ah inaysan awoodi karin Pogba, kaasoo lagu qiimeeyo ku dhawaad ​​150 milyan ginni.
Sida laga soo xigtay Wargeyska TuttoSport, oo ay soo xiganeyso Daily Mail, Juventus ayaa diyaar u ah inay Pogba dib ugu soo celiso Magalada Turin bisha Janaayo iyadoo ciyaaryahanka khadka dhexe ee ku guuleystay Koobka Adduunka uu doonayo inuu ka tago Man United.
Pogba ayaa markii ugu horeysay ka tagay Man United kuna biiray kooxda Juventus sanadkii 2012 wuxuuna ku riyaaqay xirfadiisa ugu wanaagsan noloshiisa Turin, isagoo dhaliyay 34 gool isla markaana sameeyay 42 caawin 178 kulan uu ciyaaray halka uu ku guuleystay sideed koob afar sano gudahood.
Waxaa la sheegay in Pogba uu haatan damacsan yahay inuu ka tago suuqa jiilaalka isla markaana Juventus ay diyaar u tahay inay ka faa’ideysato xaalada pogba.
Si kastaba ha noqotee, waxaa weli laba sano uga harsan tahay qandaraaskiisa Man United waxay kaloo haysataa fursad ay ku sii dheereysato sannad kale, iyadoo lagu soo waramayo in Ole Gunnar Solskjaer uusan diyaar u aheyn inuu u fasaxo Pogba haddii uusan helin bedelka kiisa.
Sheffield United Vs Liverpool -Liverpool Oo Aan Waligeeda Sheffield Uga Badin Garoonka Bramall
FALANQEYNTA: Getafe Vs Barcelona- Getafe oo aan rikoor fiican ku lahayn kooxda difaacanaysa horyaalka